Madaxweynaha oo u ambabaxay dalka Ethiopia – Radio Muqdisho
Madaxweynaha oo u ambabaxay dalka Ethiopia
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wefdi uu hogaaminaayo ayaa galabta ka dhoofay magaalada Muqdisho, ayagoo ku sii jeeda dalka Ethiopia oo ugu qeybgali doono shir caalami ah oo looga hadlayo dhaqaalaha kaas oo maalinta beri ah sida uu qorshuhu yahay ka furmi doona magaalada Adis Ababa.
Madaxweynaha ayaa safarkiisa waxaa ku wehliya wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya iyo xubno kale.
Shirkan ayaa waxaa ka qeybgalaya 30 dowladood oo caalamka ka kala socda waxaana soo qaban qaabisay qaramada Midoobay, waxaana looga hadlayaa horumarinta dhaqaalaha aduunka, iyadoo ay tahay markii ugu horeysay oo Afrika lagu qabto.
Shirka ayaa waxaa si gaar ah diirada looga soori doonaa maalgashiga Afrika kaas oo socon doona 13 -16 bishan Luulyo, waxaana ka qeybgalaya madaxweyniyaal ,wasiiro maaliyadeed iyo ganacsato.
Xoghayaha guud ee qaramada Midoobay Ban Ki Moon ayaa kamid ah madaxda ka qeybgali doonta shirkan, iyadoo gudoomiyaha xilligan ee midowga Afrika ahna madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe iyo guddoomiyaha gudiga Midowga Afrika Dr. Nkosazana Dlamini Zuma.
Ajendiyaasha shirka ayaa waxaa kamid ah in dowlaha qaaradda Afrika laga horumariyo hanaanka canshuuraha iyo hagaajinta dakhliga gudaha,sameynta maalgashi key saabsan caafimaadka iyo horumarinta beeraha qaaradda Afrika.
Shirkan caalamiga ah oo looga hadlayo horumarinta dhaqaalaha ayaa ah markii sadexaad oo la qabta waxaana kan kii ka horeeyay lagu qabtay magaalada Doxa ee dalka Qatar
Safaarada Soomaaliya ee Qatar oo soo dhaweysay guusha ay soo hoyeen kooxda kubadda cagta ee Jaalliyadda-Sawirro